ADY AMIN’NY HERISETRA : MIANTSEHATRA MIARAKA AMIN’NY POLISIM-PIRENENA NY FILOHAM-POKONTANY » Police Nationale
« CSP4 ISOTRY : MITOHY NY EZAKA FANADIOVANA IREO FARITRA IZAY MALAZA FA ANJAKAN’NY ASA FANENDAHANA
FARITRA SAVA : MITANDRO NY FAHADIOVANA IHANY KOA NY POLISY AO AMIN’NY FARITRY SAMBAVA »
Mba ho fanatanterahana ny paika napetrak’Andriamatoa Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police RAFANOMEZANTSOA Roger, dia nisy ny fanentanana mahakasika ny ady amin’ny herisetra notanterahina ny zoma 30 Aogositra 2019 tao amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Fanentanana natao tamin’ny Filoham-pokontany miasa eto Antananarivo Renivohitra, mba ahafahana manamafy ny fisorohana ny ady amin’ny herisetra. Ny tanjona dia hampahafantatra an’ireo filoham-pokontany ireo ny antony hiadiana amin’ny herisetra sy ny anjara toerana misy azy ireo mba ampahomby izany ady izany.
Raha ny eto Madagasikara dia tranga 2 ny herisetra mifototra amin’ny miralenta izay mateti-pitranga : ny herisetra ao an-tokatrano ka ny maro amin’izany dia ny herisetra eo amin’ny mpivady, ary ny herisetra atao amin’ny ankizy, toy ny fampijaliana ny ankizy. Nampahafantarina azy ireo fa ny herisetra ara-batana eo amin’ny mpivady no tena mateti-pitranga, ary koa ireo karazana tsy fandraisana andraikitra ao an-tokatrano toy ny fandaozana tokatrano, ny tsy famelomana, ny fandaozana zanaka. Manaraka izany ny fanolanana sy ny fifamotorana na inceste.
Antananarivo Renivohitra dia efa manana sampandraharaha afaka mandray an-tanana ireny olona iharan’ny herisetra ireny, araky ny filany avy ka afaka andefasan’ireo filoham-pokontany azy ireo, ankoatran’ny heloka bevava izay tsy maintsy alefa eny amin’ny mpikaroka fandikan-dalàna. Ohatra amin’izany ireo toerana fihainona izay tantanan’ny Minisiteran’ny mponina sy ireo toerana fandraisana tantanin’ny tananan’Antananarivo. Ho an’ny herisetra mifantoka amin’ny fanararaotana ara-nofo dia eo ny Centre Vonjy eny amin’ny Maternité Befelatanana ; ho an’ny fametrahana fitoriana dia eo ny sampan-draharaha manokan’ny Polisim-pirenena: ny Service Central de la Police des Mœurs et de la Protection eny Anosy, ny Division Cybercriminalité eny Anosy ary ny Division de la Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs ao Tsaralalana. Afaka mametraka fitoriana mivantana eny amin’ny fitsarana ihany koa anefa ny olona niharan’ny herisetra.
Ny Brigade Féminine de Proximité ou BFP kosa dia afaka mandray ireo antso an-tarobia mitoroka na mampahafantatra ny trangana herisetra rehetra ary azo antonina mivantana ihany koa ny BFP ao amin’ny Commissariat Central Antananarivo Renivohitra.
Arak’izany dia afaka mandray ny fitorohana sy ny fampahafantarana ny trangana herisetra ihany koa ireo filoham-pokontany, ka anjarany avy eo no mahita raha azo atao ny fandaminana eo anivon’ny fokontany na avy hatrany dia alefa manantona ireo sampan-draharaha isan-karazany ireo ilay olona. Ny fokontany tokoa mantsy no rafitra manakaiky indrindra ny vahoaka ka izany indrindra no nahatonga ny Polisim-pirenena nanamafy ny fiaraha-miasa amin’izy ireo. Dia mba hanamafisana hatrany ny politika mifantoka amin’ny polisy manakaiky ny vahoaka.
Filoham-pokontany 138 amin’ireo 192 no namaly ny antso, niaraka tamin’ny délégué d’arrondissement miisa 4 sy ny solotenan’ireo mpiara-miombon’antoka, toy ny minisiteran’ny mponina izay mpandrindra ny ady amin’ny herisetra eto Madagasikara, ny tananan’Antananarivo, ny Fikambanana Fitia, ary ny FNUAP. Mpiantsehatra avy ao amin’ny Polisim-pirenena kosa no nanao ny fanentanana dia ny kaomandin’ny Brigade Féminine de Proximité –ny Officier de Police RAZAKATSIHOARANA Baovola, ny lehiben’ny Division de la Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs ao Tsaralanana ny Commissaire de Police ANDRIAMIANDRA Nivoherifidy ary ny « point focal Genre et VBG » eo anivon’ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ny Commissaire Divisionnaire de Police RANDRIAMBELO Ny Aina.
Ny tanjona manaraka dia fanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ny mpiantsehatra eny anivon’ny boriborintany eto Antananarivo Renivohitra.